Saameynihii Dagaalka Tukaraq, Sirta Mareegta Bussfeed News, iyo daraasada saxafiyada karsten Lundell Ay Ku Bandhigtay Buuggeeda ''Bussines Blood And Oil''. - WalWaal Online News and Information about Somalia
Home Bulshada Saameynihii Dagaalka Tukaraq, Sirta Mareegta Bussfeed News, iyo daraasada saxafiyada karsten Lundell...
Saameynihii Dagaalka Tukaraq, Sirta Mareegta Bussfeed News, iyo daraasada saxafiyada karsten Lundell Ay Ku Bandhigtay Buuggeeda ”Bussines Blood And Oil”.
Wejiga dhabta ah ee uu leeyahay dagaalka ka socda degaanka Tuka-raq. Markaan meel iska-dhigno mixnadaha nagu dabran oo ay u wayn-tahay caadifada indhaha-la´ ee naga xagaalisay hooshaarkii ummadnimo waxaanu arkaynaa dagaalkan in uu yahay mid lamid ah dagaal-kasta ee dad sokeeye ah dhex-mara ee dunida ka dhaca. Waa dagaal wakaaladeed (Proxy War) oo legdankiisu uu ka dhexeeyo shirkado shidaal, laakiin shakhmadka la dhaqaajinayo uu yahay siyaasi Soomaali ah iyo dhallinyaro soomaaliyeed oo ka amar-qaadanaya.
Shirkadahaas oo ay leeyihiin dowlado shisheeye ayaa hadda ka-hor waxay midna heshiis la gashay maamulka Puntland midna maamulka Somaliland.
Mid ka mid ah wargaysyada ka soo baxa dalka Sweden oo la yiraahdo Aftonbladet ayaa taariikhdu markii ay ahayd 28/ 5- 2018-kii wuxuu daboolka ka qaaday arinkaas. Wargeyska oo soo qoray maqaal uu arintan ku caddeynayo, wuxuu cinwaan uga dhigay Dagaalka ka dhexeeya Norway iyo Sweden ee shidaalka Soomaaliya (Norska – Svenska Krig om Olja i Somalia)
Maqaalku wuxuu ku tilmaamay dagaalkan mid u dhexeeya laba shirkadood oo laga kala leeyahay labadaas dal. Haddaan isku deyo in aan soo af-rogo qayb kamid ah dhigaalkii, waxaa hor-dhiciisa ka mid ah: Laba shirkado shidaal, ”Lundin Africa Oil” oo laga leeyahay Sweden iyo DNO (Den Norska Oljeselskap) oo laga leeyahay Norway, mid waliba waxay horey heshiis ula dhigatay mid ka mid ah labada maamul oo aanan midkoodna ictiraaf caalamia ah heysan. Heshiisyadu waxay la xiriiraan hal ceel shidaal oo labada maamul ay ku dagaalansan yihiin. waa dhul qallalan oo dhagaxa ah oo ku yaal degaanka Hol-hol ee (gobolka Sool)
Waxaa jira meel laga helayo calaamad raadka keliya oo ka muuqda uu yahay (Nugaal 1). Waa meesha uu ku yaal ceelka Hol-hol ee shidaalka. Calaamaddaas hoosteeda waxaa yaal hodantooyo wayn oo shidaal ah ayay tidhi warbixintu .
Labada deegaan ee deriska la ah, deegaankaa hodanka ku ah shidaalka, waxaa jira lacago ay xiiseynayaan oo ah dhaqaalaha ay shirkadaha shidaalka ku bixyaan cidda sheegata in ay ceelka maamuleyso. Iyada oo maamullada ay xiiseynayaan dhaqaalahaas ay shirkaduhu bixiyaan, ayaa bishii 25 octobar 2007-dii Somaliland, dagaal uu dhiig ku daatay waxay ku qabsatay magaalada Laascaanood.
Dagaalkaasi wuxuu dhaliyay in boqollaal kun oo qof ay qaxaan. Haddana 1-dii november 2012-kii ayaa waxay qabsadeen Xuddun oo ah degmo Laascaanood ah. Abriil 2013-kii, shirkadda DNO waxay heshiis la gashay maamulka Somaliland, kaas oo la xiriira ceelka shidaalka ee Hol-hol, iyada oo Hol-hol ay weli ku jirto gacanta maamulka Puntland. 24-kii abriil 2017-kii, ciidamada Somaliland waxay qabsadeen Hol-hol. Tan iyo maantana shacabka reer Sool iyo cuqaashooda ma oggola maamulka Somaliland.
Haddaan intaas kaga hadho qoraalkii wargayska, gabadha la yiraahdo Kerstin Lundell ee maqaalka leh, waa saxafiyad u dhalatay dalka Sweden. Iyadu goor hore ayay daba-galkan bilowday arrintan. Waxay isku-deydey in ay wareysato labada shirkadood ee xiiseynaya ceelka Hol-hol.
Mid waliba waa uu ka diidey in uu siiyo war-bixin. Ma ku heshiiyeen oo mid ka mid ah maamullada ayay u xil-saarteen ceelka, mase weli waa ay ku dirirsan yihiin oo labada maamul ayay u kala hiilinayaan ?.
Mid ay tahayba jawaabta su´aashan, waxaa muuqata oo dhallinyarada deegaanka ay yihiin kuwo u sharaxan in ay dhiig badan ku daadiyaan dagaalkan wakaaladda ah. Iyada oo maslaxadda keliya ee siyaasigu ay tahay sida ugu wanaagsan ee uu u dhowran lahaa lacagaha uu helayo.
Kerstin Lundell ,waxay qortey buug ay ku magacawday Ganacsi dhex-yaal Dhiig iyo Shidaal (Business in Blood and Oil).
Meelaha ay sida xooggan uga warantay waxaa kamid ah dagaalka wakaaladaysan ee ka socda waqooyiga Soomaaliya. Buugeedaaas waxay dhinac kaga xustay siyaasadaha iyo lacagaha ay adeegsanayaan shirkadahan ugaadhanaya hantida ceyriin si ay ceelashaas u hantaan.
Dhanka kale waxay xustay dhibaatada ku kordheysa xaaladda dadka saboolka ah ee nolosha ku dhibban, taas oo ay sababtay hantida dabiiciga ah oo ay leeyihiin iyo mowqifka khaldan oo hoggaankoodu qaadanayo.
Waxaa hubaal ah, haddii siyaasiyiinta laga helo dhiiranaan ay kaga tagaan caadifadda beenta ku dhisan oo ay dad-waynaha ku maaweelinayaan, dabadeed ay u gudbaan in ay xaqiiqada nolosha la fal-galaan. Waxaa suuragal noqon lahayd, hantida ceegaagta ceelkaas iyo hantida kale oo badan ee uu dalku leeyahay, in uu qof walba oo Soomaali ah ka hodmi lahaa.
Laakiin waxaa dhibaatadu ka taagan tahay siyaasi ayan u muuqan dhiigga dhallinyarada ee hudurka ku qubanaya, iyo natiijada ka danbeysa ee ah waalidiin gablamtaa, xaasas asay qaada iyo caruur agoomooba.
Siyaasi la maslaxada ah shirkadahaas doonaya in ay ka taajiraan hantida deegaanka oo aanan kala jecleyn guryaha ku baaba´aya, Siyaasiga caynkaas ah markii uu helo shacab indha-la´ oo u jidbeysan codkiisa uu ku jilayo geesinimo uu ku difaacayo danaha beesha, Markaas dad-waynaha iyaga ayaa go´aanka leh ay qarniga 21-aad caruurtooda ama ku gumeyn lahaayeen ama kaga badbaadin lahaayeen..
Xuska qalinkan oo uu leeyahay: Dr. Saadiq Enow iyo xogta inteeda Badaba, hadana waxaan idinla wadaagi doonaa doorka ay ku leeyihiin hogaamiyihii hore ee xisbiga consertative ka ”micheal haward” iyo agaasimihii hore ee shirkadda ”soma oil and gas” xasan cali khayre Raisal wasaaraha somalia, iyo sidoo kale decument ga sirta ah ee lagu faafiyey mareegta ”Bussfeed News” iyo ugu danbayn buuga Karsten Lundell ee lagu magacaabo ”Business In blood and oil”
Waan kaaga mahadcelinayaa akhriskaaga;
W/Q Faisal Ahmed Karshe
Previous articleMadaxweyne Farmaajo oo ku wajahan Turkiga
Next articleCeergaabo & mayor ka aan marnaba dhicin